Axmed Siilaanyo iyo Nelson Mandella, Hogaamiyeyaal Wadaagay Taariikh iyo Geesinimo Dunida ku Yar | Somaliland Post
Home Maqaallo Axmed Siilaanyo iyo Nelson Mandella, Hogaamiyeyaal Wadaagay Taariikh iyo Geesinimo Dunida ku...
Axmed Siilaanyo iyo Nelson Mandella, Hogaamiyeyaal Wadaagay Taariikh iyo Geesinimo Dunida ku Yar
Hogaamiyaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo hogaamiyahii ladagaalanka midab kala sooca Koonfur Afrika ee Nelson Mandella, ayaa noqday laba hogaamiye oo taariikhdoodu isku eegtahay. Waxa ay wadaagaan waxyaabo badan oo aan lagu xasuusan hoggaamiye kale oo soo marey Afrika iyo dunidan casriga ahba.
Marka aad dub u milicsato taariikhda ay soo mareen. Marka aad xasuusato go’aamada siyaasadeed ee dhaxalka noqday ee ay labadooduba qaateen oo isku mid ah iyo arrimo badan oo ay umaddooda u qabteen, Axmed Siilaanyo iyo Nelson Mandeella waa rag taariikhdoodu isku eegtahay, isla markaana wadaaga geesinimo dunida ku yar.
Madaxweyne Siilaanyo waxa uu u soo shaqeeyey umadda Soomaaliyeed oo dhan. Waxa uu ahaa xooggii iyo maskaxdii uu ku fadhiyay, horumarkii Soomaaliya ka dhacay sannadahii 1969 ilaa iyo 1980kii ee uu ku faani jiray kacaankii Afweyne Barre. Waxa uu ahaa aqoonyahankii loo xulay sida loo maamulayo Soomaaliya markii uuu kacaanku qabsaday, isaga oo soo jeediyey talooyin lagu badhaadhey intoodii lahirgaliyey. Sida oo kale Siilaanyo oo ahaa aqoonyahankii waqtigaa laheystay waxa loo dhiibay jagadii horumarka wadanka laga hagaayay oo aheyd wasaaraddii qorsheynta qaranka Soomaaliya.
Nelson Mandella waxa uu ladaagalllamay midab kala soocii Koonfur Afrika, halka uu Axmed Siilaanyona ladagaallamay kali taliskii iyo isir tirtirkii ka socday Soomaaliya ee uu Afweyne hormuudka u ahaa.
Markii uu guuleystay Nelson Mandella, waxa uu iska cafiyay cidkasta oo kasoo gashey godob siyaasadeed intii uu halganka ku jiray, halka Axmed Siilaanyona cafiyey dhammaan beelahii iyo dadkii godobaha siyaasadeed ka galey lagasoo bilaabo ladagaalankiisi kacaanka ilaa iyo maanta oo wadanka madax kayahay. Waxyaabaha layaabka leh ee xukuumaddiisa lagu arkey waxa ka mid ah: Masuuliyiingtii UDUB ee dagaalka daran ku qaadey markii uu mucaaradka ahaa, ayuu u magacaabey xilal waaweyn sida taliyahii hore ee booliska Soomaaliland Saqadhi Dubad. Wasiirka arrimaha gudaha Cali Warancaddee, wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha Maxmed Muuse Diiriye.
Taariikhda Mandella waxa ku xusan in uu galey xabsi dheer, halka ay taariilkda Siilaanyona ku jirtey in uu dub u galay halgan uu kula dagaallamaay, cabudhinta shacabka iyo xorriyatu qowlka, iyo fadhiidnimada dowladda. Halgankan laba kacleynta ahaa ayaa waxa uu ahaa shaqo kale oo aad u culus oo u dhiganta xabsiga dheer ee uu galey Mandella.
Siilaanyo waxa uu hor seeday tallaabo ku dayasho mudan markii uu aqbalay in uu ka badiyey Rayaale oo ahaa nin siyaasad ahaan iyo taariikh ahaanba aan u dhigmi karin Madaxweyne Siilaanyo, isla markaana uu kaga badiyey cod yar oo mad madow badan ku jiray. Arrintaasi waxa ay keentay in ay Soomaaliland soo jiidato indhaha caalamka, maxaa yeelay waxa adag hoggaamiye Afrikaan ah oo u dulqaata madmadow dhaca isaga oo aarsan kara. Madaxweyne Siilaanyo waa uu heli karay in uu ku ciil baxo xoog siyaasadeed, mid sharci iyo mid millateri oo uu kaga jawaabi karey waxa dhacay, laakiin Siilaanyo waxa caddaatay hayiinnimadiisa siyaasadeed, iyo lexejeclada xooggan ee uu dadkiisa iyo dalkiisa ka qabo, sida oo kale mamuujin cadaawad uu u qaaday dadkiisii ka horreysiiyey nin aanu Siilaanyo u qalmin in labarbar dhigo iyo in lala tartansiiyoba.
Intii uu hoggaaminayey dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxa uu hirgaliyey wax qabad aan hirgalin intii ay Soomaaliland jirtay ee isaga ka horreysay oo dhan.
Maanta oo ay bishu aheyd 10/nov/2015 waxa uu mar kale dhaliyey goolkii ugu layaabka badnaa, oo ahaa in uu katanaaasulo mar labaad oo isasoo sharraxo. Axmed Siilaanyo oo dastuurka Soomaaliland siiyay in uu dub u soo tartami karo ayaa waxa uu caddeeyey in uu fursaddaan u bannneeyey dadka kale ee hanka siyaasadeed ku jiro. Iyada oo aynaan heynin meel uu ku taageeray Musharrax Muuse Biixi, haddana Muuse waxa uu ku soo carbiyey hayiinnimadiisa siyaasadeed. Sidaa silamid ah Nelson Mandella waxa uu ahaa madaxweynahii ugu horreeyey ee tanaasulay isaga oo tartami kara.
Ugu dambeynti waxa xusid mudan muddada rubux qarniga ku dhow ee uu Siilaanyo siyaasadda ku jiray in aanu guri ka dhisan hantida umadda oo aanu jirin maanta guri uu uga guuro madaxtooyada marka uu banneeyo. Halka uu madaxweynahii ka horreeyey iyo rag badan oo masuuliyiin kale noqdayba ay guryo fooqyo ah ka dhisteen caalamka iyo dalka gudahiisaba.
Iskusoo wada xooriyoo Madaxweyne Siilaanyo waa hoggaamiye ay taariikhdu sheegayso oo aan u baahneyn in dadku sheego. Waa hoggaamiye aan hambalyo lagusoo koobi karin waxa uu mutaystay. Waa hoggaamiye mudan in lagudoonsiiyo billaddii lasiiyay (Nobel Peace Prize) ninkii ay isku taariikhda egaayeen ee Nelson Mandella.
Cilmi Baadhe Arrimaha Bulshada Iyo Siyaasadda ah
Maxamuud Daahir Cismaan